recycled | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
စကော့ပြည်သွား မှတ်တမ်း “ ဂရံပိယာသို့ မရောက်မီ၊ စာသင်ကျောင်းအနီး လမ်းက တောင်မျက်နှာ လက်ယာဘက်သို့ မျှော်တင်း ကြည့်ရှုလိုက်လျှင် အက်ဒင်ဗာရမြို့သစ်၊ ၄င်းမြို့ဟောင်း ခံမြို့နေရာ၊ အက္ခဏီက ဓာတ်တိုက်၊ ပရင်စစ် အာသာစိတောင်များကို ခင်းကျင်း၍ပြသကဲ့သို့ မြင်ရသည်။ အလွန်လှပတင့်တယ်ရှိသည်။ သိုးဆောင်းနိုင်ငံတွင် မြို့ကြီးလှမှာ ပါရစ်မြို့၊ မြို့ငယ်လှမှာ အက်ဒင်ဗာရမြို့ လှပတင့်တယ်ရှိကြောင်းများကို မှတ်သားပြောဆိုကြကြောင်း ကြားသိရသည်။…” (ကင်းဝန်မင်းကြီး လန်ဒန်မြို့သွားနေ့စဉ်မှတ်စာတမ်းမှ) ပြီးခဲ့သောရက်များအတွင်း အခွင့်ခံ၍ အထက်ပြည်မြို့ရွာများကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရာ စကော့သူဟောင်းတို့ အမွေတိုက်တာရေမြေကို နှောင်းလူတို့ အသိကြီးကြီးနှင့် မပျက်ယွင်းအောင် ထိန်းပုံကို အားကျခဲ့သည့်အပြင် ဤသို့ ဝေးလံခေါင်သီ ဥတုပြင်းထန်သည့် တောင်ပေါ်ပြည်မှ ကမ္ဘာချဉ်းအောင် ပညာ ဓနနှင့် သတ္တိဗျတ္တိစွမ်းများပြခဲ့ပုံကိုလည်း ဆင်ခြင်မိပါသည်။ တနည်း ဗြိတိန်၏ ပြည်ထောင်စု ယဉ်ကျေးမှုကို […]
A police state and the problem ofamedia ‘third force’ For Mizzima News If you wereaBurmese soldier who died in action against the Communist guerrillas in the 1960s, and were born again in Rangoon at the dawn of the Naypyitaw-cracy, you would find it hard to notice any change in the socio-political […]
Update from Rangoon, Dear BB DTY confirmed that BNW didn’t say such things to him at CNW’s funeral. BTY and BNW belonged to the thirty comrades and they never lost contact. Saya Ta is impressed with your works and believes you’ll go far, the sentiment which I also share. Sincerely … ဒဂုန်တာရာဟာ ပရောဂျက်နဲ့ စာပေသစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဖူး။ သူနဲ့ခေတ်ပြိုင်တချို့ […]
Filed under: anniversaries, arts and culture, history, literature, politics, recycled	|4Comments